Tanora: navondrona ny tahirin-kevitra ho fandraharahana | NewsMada
Tanora: navondrona ny tahirin-kevitra ho fandraharahana
Maro ireo tanora miditra amin’ny sehatry ny fandraharahana amin’izao fotoana izao. Misy amin’izy ireo ny mitondra tetikasa, ao ny efa anatin’ny sehatry ny fandraharahana ary ao ny fikambanana mpandraharaha. Navondrona ny tahirin-kevitra avy amin’izy ireo noraketina ho boky, ary hatolotra ny mpiara-miombona antoka, fanjakana na sehatra tsy miankina. Tanjona ny hitondran’ireo mpiara-miombona antoka, resy lahatra amin’ny tetikasa, fanampiana tosika sy tolokevitra isan-karazany. Manana traikefa rahateo ireo mpiara-miombona antoka ireo amina sehatra tiana hiasana.
Araka izany, mbola misedra olana amin’ny tsy fahampiana maro ny tanora te ho mpandraharaha. « Sarotra ny ahazoana famatsiam-bola ho an’ny tetikasa iray, indrindra raha tsy misy mpiantoka », hoy ny sasany amin’ireo tanora; sarotra ihany koa ny manangana tetikasa iray, noho ny antony maro: fahazoana tany, taratasy ara-panjakana isan-karazany… Misy aza noho ny antony politika, ny fijerena loko politika sy ny foko any amin’ny faritra.
Miantso fifandraisana bebe kokoa ireo tanora hiroso amin’ny fandraharahana. Hita ao anaty tahirin-kevitra navondrona natao boky ny tetikasa isan-karazany naroson’ireo tanora ireo. Hampihena betsaka ny tsy fananana asa ny fanampiana azy ireo, izay iaraha-mahalala ny fahamaroan’ireo tanora tonga eo amin’ny tsenan’ny asa. Tsy maintsy andraisana mpiasa vaovao, araka ny sokajiny avy, izay tetikasa mahazo tohana.